အဘယ်အရာကို Extremadura အတွက်ကြည့်ရှုပါ ခရီးသွားသတင်း
အဘယ်အရာကို Extremadura အတွက်ကြည့်ရှုပါ
Mariela Carril | | Espana, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
Estremadura ၎င်းသည်စပိန်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်နှစ်ခုဖြစ်သော Badajoz နှင့်Cáceresတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ နှစ်ပေါင်းများစွာသမိုင်းရှိခဲ့သည့်နယ်မြေဖြစ်ပြီးယနေ့တိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းထားသောလင်းပိုင်များ၊ ဂူပန်းချီကားများ၊
ဤထောင်စုနှစ်များကကျွန်တော်တို့ကိုယူဆောင်လာသည် အများအပြားခရီးသွားနေရာများ အလွန်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Extremadura နှင့်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုများသို့ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုအဆိုပြုထားသည်။ ဒီနေ့တော့ အဘယ်အရာကို Extremadura အတွက်ကြည့်ပါ။
2 အဘယ်အရာကို Extremadura သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်
ဒါဟာanရိယာဖြစ်ပါတယ် အိုင်ဘာရီယန်ကျွန်းဆွယ်၏အနောက်တောင်ဘက်တွင်ရှိသည် ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲမြို့တော်ဟာလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ကြီးနှစ်မြို့ပါ။ နှင့် ရာသီဥတုမှနွေးခရမ်းချဉ်သီးများ၊ ငရုတ်ကောင်းများ၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့်စပျစ်သီးများကိုဤနေရာတွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။
အ ရိုမန် သူတို့ကဒီမှာအခြေချ, လမ်းများတည်ဆောက်, ဆပ်ကပ်နှင့်အတူကြွယ်ဝသောမြို့ကြီးများ, စျေးကွက်နှင့်အများပြည်သူအဆောက်အ ဦး ။ ဥပမာ၊ Merida သည်ကြီးမား။ သွက်လက်ပြီးယဉ်ကျေးမှုအရကြွယ်ဝသောမြို့ဖြစ်လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အင်ပါယာပြိုလဲသွားပြီးအချို့သောလူရိုင်းလူမျိုးများရောက်ရှိလာသည် ig, အလှည့်အတွက်အိုးအိမ်မဲ့ Saracens အလယ်ခေတ်၌တည်၏။
Este မူဆလင်ခေတ် သူဟာရောမတွေထက်ပိုပြီးချမ်းသာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ Reconquest သည်အထိငါးရာစုနှစ်ကြာခဲ့သည်, León၏နိုင်ငံတော်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Castile ၏နိုငျငံတျောနှငျ့အတူ။ တိုင်းပြည်နှစ်ခုပေါင်းစည်းပြီးသောအခါထိုသရဖူများအောက်ရှိ Extremadura ဒေသနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ဂျူးများ၊ ခရစ်ယာန်များနှင့်မွတ်စ်လင်မ်တို့၏သဟာယပြုမှုသည်ကက်သလစ်archကရာဇ်များ၏အမိန့်ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးအားလုံးသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းရမည်သို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခံရမည်
၁၆ ရာစုတွင်အမေရိကသို့ရောက်လာသောစပိန်စွန့်စားသူအများစုမှာ Extremadura မှဖြစ်သည်။ ဥပမာ, HernánCortés, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia…နောက်ပိုင်းတွင်ပြည်တွင်းပconflictsိပက္ခများနှင့်စပိန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲပေါ်ပေါက်လာမည်။ သူတို့၏လက်မှလည်းသူတို့ထံမှလွတ်မြောက်ရန်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုများနှင့်ကြီးမားသောပြည်တွင်းပြောင်းရွှေ့မှုများဖြစ်လာလိမ့်မည်။
အဘယ်အရာကို Extremadura သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်
Extremadura တွင်ရာစုနှစ်များစွာသမိုင်းရှိကြောင်းပြောပြီးမူအရကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုရာပေါင်းများစွာသောနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမွေအနှစ်ကိုပြောရမည်။ ၏ ရောမခေတ် ငါတို့လည်ပတ်နိုင်တယ် Merida ရောမ ရောမအပျက်အယွင်းများသည် Plaza Margarita Xirgu တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်းဆွယ်ရှိရောမလူနေမှုဘဝကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပေးသည်။ ဟုတ်တယ် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် နှင့်စပိန်အတွက်အရေးအပါဆုံးရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများတစ်ခု။
ရောမအပျက်အယွင်းများသည်ကိုလိုနီ၏နံရံများအတွင်း၌ရှိသည်။ ပြဇာတ်ရုံတစ်ခု၊ ပွဲကြည့်စင်နှင့်အန်ထဖီတာ၏အိမ်၊ ဆပ်ကပ်နှင့်ပင်စည်တစ်ခုရှိသည်။ အဲဒီမှာ အံ့ဖွယ်အရေအစု, Pórtico del fro, Trajan ၏ Arch, Mitreo ၏အိမ်နှင့် Diana ဘုရားကျောင်း။ နံရံအပြင်ဘက်တွင်ဂွာဒါနာမြစ်ကူးတံတားဖြစ်သော San Lázaro၏တံတားတစ်ခုရှိသည်။ Alange ရေပူစမ်း (Méridaမှ ၁၈ ကီလိုမီတာ၊ အေဒီ ၃ ရာစုမှ ၄ င်း၏အမိုးခုံးများဖြင့်ယနေ့အထိတည်ရှိသည်) နှင့်ရေကာတာနှစ်ခုဖြစ်သော Proserpina နှင့် Cornalvo တို့ဖြစ်သည်။
ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနအဆောက်အအုံကို9ပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိနံနက် ၉ နာရီမှည ၁၀ နာရီအထိဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာမှမတ်လ ၉ ရက်မှညနေ ၆:၃၀ နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားသည်။ တံခါးပေါက်တစ်ခုလုံးအတွက် ၁၅ ယူရိုနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုစီအတွက် ၆ ယူရိုရှိသည်။ နောက်ထပ်ရောမ site ကိုဖြစ်ကြသည် Cáparraအပျက်အယွင်းPlasencia နှင့်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာတွင်ရှိသည်။ the ည့်သည်မှလိုက်နာသည့်လမ်းကြောင်းနှင့်အနက်ဖွင့်စင်တာ၊ necropolises သုံးခု၊ ဂိတ်များနှင့်ပွဲကြည့်စင်မှတစ်ဆင့်လမ်းပြသောလမ်းကြောင်းရှိသည်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့
ရောမခေတ်မှထွက်ခွာသွားသည် အာရပ်ခေတ် နှင့် Alcazaba, Badajoz ၏အစအ ဦး ကတည်းကနှုန်း၏ရှင်ဘုရင်၏နေထိုင်ရာ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အရာမှာ ၁၂ ရာစု Almohad အချိန်ကာလမှစတင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဇာစ်မြစ်သည် ၉ ရာစုမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Alcazaba တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ပေါ်တူဂီနှင့်နယ်စပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ခံတပ် ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားပြီးစွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်တံခါးလေးပေါက်ရှိပြီးမည်သည့်အထဲမှမဆိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည် Coraxa နှင့် Yelves တံခါးများအပြင်Apéndizနှင့် Capitel တံခါးများသည် Almohad ခေတ်မှဖြစ်သည်။
တာဝါတိုင်များလည်းရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် Torre de Espantaperros၊ အတွင်းပိုင်း Roca ၏နန်းတော်သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်၊ စန်တာမာရီယာတာဝါ၊ Episcopal နန်းတော်မျှော်စင်နှင့်ဥယျာဉ်များကဲ့သို့သောခြံဝင်းတစ်ခုရှိသည်။
အ La Alcazaba ၏မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများ ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ ဝန်ခံချက်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးဝန်ခံချက်မပေးပါ။ ၎င်းသည် Cerro de la Muela တွင်တည်ရှိသည်။ Cáceresအတွက်ဖြစ်ပါတယ် Guadalupe ၏တော်ဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်း ၎င်းသည် Alfonso XI လက်အောက်ရှိ Mudejar ဘုရားကျောင်းဖြစ်လာသည့်ရသေ့ငယ်လေးမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ဘာသာသုံးဘာသာရှိသည်။ လက်ရှိဘုရားကျောင်းသည် Gothic ပုံစံဖြစ်သည်။ အယ်လ်ကွန်ကိုသားဂျော့ဂ်ျ Manuel Manuel Theotocópuli၏ပန်းပုများရှိသည်။
အလွန်လှပသောအတွင်းပိုင်းများရှိပြီး၎င်း၏ပြတိုက်များကထိုက်သင့်သည်။ တစ်ခုမှာပန်းထိုးရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာပန်းချီနှင့်ပန်းပုအတွက်ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုမှာသေးငယ်သောစာအုပ်များဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်နံနက် ၉း၃၀ မှညနေ ၃း၀၀ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သည်။ အထွေထွေနှုန်းက ၅ ယူရိုဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Yuste ၏တော်ဝင်ဘုန်းကြီးကျောင်းသူသည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များကိုကုန်လွန်ခဲ့သောဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည် ကားလို့စ် V ကို။ သူ၏နေထိုင်မှုကသူ့ကိုသာယာလှပစေခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်စပိန်အမျိုးသားအမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်အင်္ဂါနေ့မှတနင်္ဂနွေနေ့မှည ၁၀ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိ၊ နွေရာသီတွင်နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၈ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သည်။ ဝင်ပေါက် ၇ ယူရိုကုန်ကျသည်
ကျနော်တို့သဘာဝရှုခင်းများအကြောင်းပြောပါကထို့နောက်အလှည့်ဖြစ်ပါတယ် Monfragüeအမျိုးသားဥယျာဉ်, သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် ornithology ချစ်သူများအဘို့။ ၎င်းသည် Plasencia၊ Navalmoral de la Mata နှင့် Trujillo မှဖွဲ့စည်းထားသည့်တြိဂံတွင်တည်ရှိသည်။ တန်ဂက်မြစ်သည်၎င်း၏တိုင်ဖြစ်သည်။ ယူနက်စကိုသည်ဥယျာဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည် ဇီဝပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး.
ဤတောင်တန်းများတွင်စံပြကျက်စားရာနေရာဖြစ်သောရေလှောင်ကန်များ၊ ချောင်းများ၊ ကျောက်များ၊ သစ်တောများနှင့်ချုံပုတ်များရှိသည် မတူညီသောနှင့်ကြွယ်ဝသောသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါ။ အမျိုးမျိုးသောငှက်များ၊ အနက်ရောင်တောငန်းများ၊ ရွှေလင်းတများ၊ လင်းယုန်များနှင့်သားရိုင်းများ၊ သမင်၊
ပန်းခြံအတွင်း၌မွန်ဂရာဂူရဲတိုက်တည်ရှိသည်။ ထိုအချိန်ကမင်းသမီးနွိုင်မာကထိုနေရာ၌နေထိုင်ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်ဒဏ္accordingာရီအရသူမအပြစ်ပေးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့လည်းရှိတယ် Villareal က de San Carlos, ထိုနေရာနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်, သင်သည်အဘယ်မှာတည်းခိုနိုင်, ခရီးသွားစင်တာများသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ပန်းခြံကို ဖြတ်၍ အထူးသဖြင့်တန်ဂက်စ်မြစ်ပေါ်တွင်မီတာ ၃၀၀ အမြင့်ရှိ Gitano ရေတံခွန်ဆီသို့ ဦး တည်သောလမ်းကြောင်းပြမျဉ်းများရှိသည်။ ဒါကအလှတရားပဲ!
လုပ်ဖို့နောက်ထပ်နေရာ တောင်တက်သမား နှင့်သဘာဝရေကန်သို့ရတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါ Melero ၏ meander။ အ Los Barruecos သဘာဝအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦးCáceresတွင်၊ ကန်နှင့်အမိုးခုံးများပါသောအံ့မခန်းဖွယ်ကျောက်ဆောင်ရှုခင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ The Orellana သဲသောင်ပြင် ဒါဟာ Badajoz, Orellana la Vieja, အမည်တူရေလှောင်ကန်၏ကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အပြာရောင်အလံကမ်းခြေ ၎င်းသည်ကုန်းတွင်းပိုင်းကမ်းခြေဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Playa Costa Dulce ဟုလည်းလူသိများပြီးရေအားကစားအမျိုးမျိုးကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ အခြားရေလှောင်ကန်၏ကမ်းခြေတွင် Gabriel နှင့်Galánရေလှောင်ကန်သည်Cáceresတွင်ဖြစ်သည် Granadilla သမိုင်းဆိုင်ရာ Complex ။
ဒါဟာတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ၉ ရာစုတွင်မွတ်စလင်များတည်ထောင်ခဲ့သောမြို့တော်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများလာရောက်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာရန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ Almohad နံရံများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ မြို့တော်သည်ခရစ်ယာန်ရဲတိုက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ အရေးကြီးသောသူများ၏မိသားစုနေထိုင်ရာအဆောက်အအုံများတွင်တခါတရံမူရင်းနှင့် ၁၁ ရာစုမှခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းများဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်၏ဤအကျဉ်းစာရင်းနှင့်အတူ Estremadura ကျနော်တို့shortကန်အမှန်အတိုကျသွားနေကြသည်။ ပြီးတော့ Extremadura ဟာကြီးမားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သင့်မှာရက်အနည်းငယ်ရှိရင်အားလုံးကိုကျော်သွားလို့မရဘူး။ အကယ်၍ ဤကိစ္စသည်သင်၏နေရာ၊ နောက်ဆုံးအချက်များ၊ နေရာများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ Méridaနှင့်Cáceresတို့သည်မလွဲမရှောင်သာဖြစ်ပြီး Badajoz လည်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ပေါင်းထည့်ထားသည့်အရာအပြင်သင်ဤမြို့များထက်ပိုမိုငြိမ်သက်သောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်လျှင်မြို့များသို့သွားပါ။ ထိုတွင်သင်အမှန်တကယ်အနားယူနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » အဘယ်အရာကို Extremadura အတွက်ကြည့်ရှုပါ